किशाेर विश्वकर्मा विराटनगर, ८ जेठ
विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा धनकुटाका ४ जना स्वास्थ्यकर्मी उपचाररत छन् । ४ जेठमा पहिलो पटक जिल्ला अस्पताल धनकुटाकी १ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कन्ट्याक ट्रेसिङका आधारमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये धनकुटाका ४ स्वास्थ्यकर्मी कोभिड अस्पतालका अन्य ४६ जना संक्रमितसँगै उपचारमा छन् । आफै उपचारमा रहेपछि उनीहरूले अन्य संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षणका विभिन्न कार्यमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामलाई सघाउँदै आएका छन् ।
सामान्य अवस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले अन्य संक्रमितलाई कोरोनाका बारेमा सचेतना र डिस्चार्जपछि गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि बताउने गरेका छन् ।
कोभिड अस्पतालका फिजिसियन डा. डेन आचार्यका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले भर्ना भए लगत्तैदेखि संक्रमितको उपचारमा सघाउँदै आएका छन् । ‘उहाँहरू सामान्य अवस्थाको हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘संक्रमितलाई कोरोनाका बारेमा विभिन्न विषयमा जानकारी गराउँदै उपचार कार्यमा हामीलाई उहाँहरूले सघाउँदै आउनु भएको छ ।’
कोभिड अस्पतालमा उपचारत १ संक्रमितलाई निमोनिया भएको छ । ‘निमोनिया भएका संक्रमितको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीले सहयोग गर्नुभएको छ’, डा. आचार्यले भने, ‘कोभिड अस्पतालमा चिकित्सक सहित २५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचारमा खटिएका छन् ।’
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू ७ दिन कोभिड अस्पतालमा रहेका संक्रमितको उपचारमा संलग्न छन् । ७ दिनको अस्पताल बसाइपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेका छन् । प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या ८४ पुगेको छ । जसमध्ये २६ जना डिस्चार्ज हुँदा ५० संक्रमितको विराटनगर स्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७, २०:०३:००